ဂျာမန်။ အသုံးပြုသောအခါ nicht, kein, nichts အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
kein — никакой
nichts — ничего
ယင်းစကားရပ်၏ negation ဆိုလိုသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်ကိုပင်သိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများရှိပါတယ်, အဲဒီမှာ go ဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။
Ich verstehe das nicht — я этого не понимаю.
kein — отрицательная форма неопределенного артикля. Примерно можно перевести как "ни один", "никакой"
Ich verstehe keine Witze — не понимаю (никаких) шуток
nichts — ничего.
Ich verstehe gar nichts — я вообще ничего не понимаю.
1.Dlya ငြင်းပယ်ကိုလည်းအစေခံ: အပျက်သဘောဆောင်သောနာမ်စား niemand (ဘယ်သူမျှမ), nichts (ဘာမျှမ), နှင့်အခြားသူများ။
ဂျာမန်ဝါကျအတွက် 2.Dlya ငြင်းပယ်အများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြု nicht မှုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဝါကျမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငြင်းပယ်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဧ #252 ;. Bersetzt diesen Satz nicht (ဒီဝါကျဘာသာပြန်ဆိုပါဘူး။ )
Wir werden diesen စာသား nicht lesen ။ (ကျနော်တို့ကစာသားကိုဖတ်မည်မဟုတ်။ )
ဧ #252 ;. Bersetzt nicht diesen Satz (သူကမ်းလှမ်းမှုမဟုတ်ကြာပါတယ်။ )
er Nicht #252 ;. Bersetzt diesen Satz (သူကမ်းလှမ်းချက်ကိုယူမဟုတ်။ )
2.Отрицательное местоимение "kein"
Pronoun kein (မျှ) အစဉျအမွဲဆောင်းပါးနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်ဆောင်းပါးမပါဘဲတစ်ဦးမှအတည်ပြုထောက်ခံဝါကျအတွက်အသုံးပြုကြသည်သာနာမ်ငြင်းပယ်ထားပါတယ်။
Pronoun kein အတွက်အနည်းကိန်းနှင့်အများကိန်းအတွက်အဓိပ္ပါယ်ဆောင်းပါးအဖြစ်အတွက်အစဉျအမွဲဆောင်းပါးကဲ့သို့အကျူလုံးသည်မှီ။ (ထိုအနည်းကိန်းများတွင်တစ်ဦးအသတ်မရှိဆောင်းပါး Ein တူသောအမှုအဘို့အပြောင်းလဲသွားသည်။ ဆောင်းပါးကဲ့သို့အ opredelnie နာမယူဘဲအများကိန်းနာမ်စား kein ။ )
Ich sehe einen Park.- Ich sehe keinen Park.(Я вижу парк. — Я не вижу (никакого) парка. )
Er hat Freunde. — Er hat keine Freunde.(У него есть друзья. — У него нет (никаких) друзей. )
Ich habe Zeit. — Ich habe keine Zeit.(У меня есть время. — У меня нет времени. )
Частица nicht. — универсальное отрицание, она может служить для отрицания любого члена предложения.
При отрицании сказуемого "nicht" стоит в самом конце предложения или перед неизменяемой частью сказуемого:
При отрицании любого другого члена предложения "nicht" стоит перед отрицаемым словом.
Отрицательное местоимение "kein" отрицает только имена существительные,
Nichts — ничего. Если Вы используете подобные отрицания (niemand, niemals, niergndwo), то имейте в виду, что в немецком языке используется только одно отрицание. Предложения вроде — Я никому никогда ничего не говорил — невозможно. Ich habe nichts gesagt. Я ничего не сказал.
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,247 စက္ကန့်ကျော် Generate ။